1 app shukaansi
Goobaha shukaansiga ee ugufiican waxay bixiyaan noocyo badan oo qarsoodi ah iyo waxyaabo kale. Maqaalkani wuxuu ujeedkiisu yahay inuu dhigo goobta ugu fiican ee shukaansi qof walba xaaladdiisa gaarka ah iyo yoolalka xiriirka.
Ugu fiican xiriirka qotada dheer - Eharmony
Kufiican xirfadlayaasha shaqeeya - EliteSingles
Best shukaansi site - Okcupid
Best shukaansi site caadi ah - AdultFriendFinder
App shukaansi ugu weyn - Gundhig
Best shukaansi site shukaansi - SilverSingles
Nidaamka iswaafajinta shakhsiyadeed ee ugufiican - Hinge
Kufiican kali kiristaanka - ChristianMingle
Best shukaansi site shukaansi - AshleyMadison
Best shukaansi app loogu tala galay dumarka - Bumble
Dumar ka badan ragga - Raadinta
Site shukaansi halis ah ka yar 30 - Zoosk
Faallooyinka isticmaalaha - Bog kasta oo shukaansi ah waxaan eegnay dib-u-eegista dukaanka barnaamijka, doodaha madasha, iyo dib-u-eegista trustpilot si loo helo goobo leh qiimeyn celcelis ahaan ugu sarreysa qayb la siiyay.
Asturnaanta iyo amniga - Qof kastaa wuxuu maqlay sheekooyin naxdin leh oo ku saabsan taariikhaha khadka toosan ama qatar ah. Goobaha shukaansiga ee ugufiican waxay soo bandhigaan waxyaabo qarsoodi ah oo qarsoodi ah iyo xitaa dhexdhexaadiyayaal si loo dhexgalo marka isticmaaleyaashu khadka ka baxaan ama ay dadka kale khatar u galaan.
Tilmaamo gaar ah - Websaydhyada shukaansiga qaarkood waxay bixiyaan adeegyo toosan oo toos ah, ha ahaato wadahadal ama wicitaan fiidiyoow. Kuwa kale waxay ka caawiyaan dadka inay ka helaan kulankooda ciyaaraha iswaafajinta, xulashada shaandhaynta, iyo inbadan. Astaamahan dheeraadka ah waxay muujinayaan fursad wanaagsan oo lagu guuleysto.
1. Eharmony - Waxa ugu wanaagsan cilaaqaadka halista ah
Malaayiin lamaane ah ayaa ku xiran Eharmony-runtiina, 400+ isticmaale ayaa guursada qof ay ku kulmaan bogga maalin kasta. Barxadda ayaa xitaa ku guuleysatay abaalmarinno sida goobta ugu wanaagsan ee lagu helo xiriiro deggan.
Eharmony waxay ubaahantahay dadka isticmaala inay dhameystiraan sahamin dheer oo ku saabsan saxiixa, oo u shaqeeya sida "nidaamka iswaafajinta iswaafajinta." Boggu markaa wuxuu adeegsadaa macluumaadkan si uu ugu soo bandhigo isticmaaleyaasha xulashooyinka shukaansiga ee guuleysan kara.
2. Elite Singles - Kufiican xirfadlayaasha shaqeeya
Xubinnimada Elite Singles waa mid aqoon sare leh, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar aad u fiican haddii dadka isticmaala ay raadinayaan wada hadallo dhiirrigelin leh. Qiyaastii boqolkiiba 85 ee kaqeybgalayaashu waxay leeyihiin shahaadada tacliinta sare, iyo 90 boqolkiiba waxay ka sarreeyaan 30 sano. Tirakoobyadani waxay xoojinayaan waayo-aragnimada nolosha ee isla'egta shukaansiga.
Boggu wuxuu u dhigmaa dadka isticmaala kali kali kale adoo adeegsanaya algorithm oo diirada saaraya jawaabahooda su'aalaha. Dadku badanaa waxay u adeegsadaan raadinta iskaashi muddo dheer ah, gudaha iyo dibaddaba. Waxay hadda ka shaqeysaa 25 dowladood.
3. AdultFriendFinder - Kufiican isku xirnaanta
Boggan looguma talagalin qof kasta oo doonaya xiriir muddo dheer ah. Waxay bixisaa laba ikhtiyaar oo asaasi ah: xodxodashada (barnaamijka) ama ku xirnaanshaha. Taasi waa taas, dadka qaarna, taasi waa sida saxda ah ee ay doonayaan.
Isku diiwaangelinta barnaamijkan waa mid fudud. Si ka duwan bogagga kale ee shukaansiga ee u baahan su'aalaha, AFF waxay ku haysaa hannaanka saxiixa ee 30-ilbiriqsi. Isticmaalayaasha ayaa markaa bilaabi kara raadinta isla markiiba.
4. SilverSingles - Waxa ugu fiican kuwa kali ah ee ka badan 50 sano
5. Bumble - Xulasho weyn dumarka
Bumble waa wax aan caadi ahayn oo ka mid ah codsiyada shukaansiga taas oo awood u siinaysa haweenka inay bilaabaan isgaarsiinta. Ragga lama xiriiri karaan cayaartooda dumarka ah illaa ay haweeneydu marka hore xiriir la sameyso mooyee. Tani waxay haweenka u oggolaaneysaa inay hoggaanka qabtaan hal mar.
Madalku wuxuu diiradda saarayaa xiriirka degdegga ah. Isticmaalayaashu waxay haystaan ​​24 saacadood oo ay kula xiriiraan, intaas ka dib, ciyaarta ayaa dhammaata. Tani waxay muujineysaa in degelku uu ku wajahan yahay iskutallaabyo lama filaan ah, laakiin sidoo kale wuxuu ku habboon yahay kuwa aan jeclayn in waqti badan lagu qaato hareeraha.
Barnaamijku wuxuu si aan kala go 'lahayn ugu dhexgalaa barnaamijyada isku xirka bulshada sida Facebook, Spotify, iyo Instagram, taasoo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay soo bandhigaan dhinacyada kala duwan ee shakhsiyaddooda. Xisaabaadka ayaa sidoo kale la xaqiijiyay si looga caawiyo in laga fogaado astaamaha been abuurka ah ee soo noqnoqda.
6. Fariid - App shukaansi cusub
Shirkaddu waxay dib u soo celisay Hinge sanadkii 2016, waana mid ka mid ah barnaamijyada shukaansi ee aadka loogu falanqeeyo sannadihii la soo dhaafay, waxayna u badan tahay inay ugu wacan tahay heerarka guusha ee adeegsadayaasheeda. Qiyaastii boqolkiiba 75 dadka isticmaala Hinge waxay doortaan inay galaan taariikh labaad kadib markay kulmaan kulamadooda.
Barxadda Hinge waa mid xiiso leh taas oo ku kicinaysa adeegsadayaasha inay jeclaadaan ama ka faalloodaan qayb ka mid ah astaanta qofka kale. Waxay dadka u siisaa waddo ay kula falgalaan wixii ka dambeeya sheekada caadiga ah.
8. Raadinta - Aabeyaasha sonkorta leh iyo carruurta sonkorta leh
Raadintu waa mid gaar ah maxaa yeelay waxay diiradda saareysaa isku xirka shaqsiyaadka da'da yar (dhallaanka sonkorta leh) ee waayeelka ah, hodanka sonkorta leh Sida muuqata, way ka caam badan tahay inta badan aaminsan, maaddaama oo ay barxadda hadda ka badan tahay 10 milyan oo macaamiil ah. Qof kastaa wuu qeexi karaa shuruudihiisa / keeda intaanay isku xidhin, haddii ay doonayaan inay safraan, dalbadaan gunno, ama tilmaamo kale.
9. JDate - Kali kali yahuuda
JDate waa adeeg shukaansi oo loogu talagalay kali yahuuda. Waxaa la aasaasay 1997 waxaana hadda laga heli karaa in ka badan 100 waddan, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay kula xiriiraan kali-yahanka Yuhuudda shan luqadood oo kala duwan (Ingiriis, Cibraan, Faransiis, Jarmal, iyo Isbaanish).
Isticmaalayaashu waxay la xiriiri karaan qof kasta oo leh xubin lacag la'aan ah ama lacag leh. Adeegga macaamiisha ayaa hubiya astaan ​​kasta si loo hubiyo in ay abuureen macaamiil dhab ah.
10. ChristianMingle - Barta shukaansi ee ugu wanaagsan Christian
ChristianMingle waxay ka caawisaa adeegsadayaasha bulshada kiristaanka inay helaan jacaylkooda weligiis ah. Waxay ku faantaa in ka badan 1 milyan oo isticmaaleyaal ah, bogga ayaa si cad u dhiirrigeliya "shukaansiga ku saleysan diinta" ee mustaqbalka fog.
Waxaa jira ikhtiyaar xisaabin bilaash ah ama xubin bille ah $ 29.95. Tan dambe waxay la timid dammaanad, halkaasoo isticmaalehu uu ku heli karo lix bilood oo bilaash ah ka dib markii xubnimadooda lixda bilood ee hore ay dhammaatay haddii aysan helin wax ku habboon.
11. Zoosk - Bulsho weyn oo caalami ah
Zoosk wuxuu ku faanaa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn ee heer caalami ah, iyadoo in ka badan 40 milyan oo xubnood oo adduunka ah. Maalin kasta, adeegsadayaashani waxay soo gudbiyaan in ka badan 3 milyan oo farriimo oo ku qoran 25 af oo kala duwan. Zoosk wuxuu ka shaqeeyaa in ka badan 80 quruumood.
12. Reddit R4R - Waxa ugu fiican isticmaalayaasha Reddit
R4R, ama Redditor for Redditor, waa hoosaad u heellan isku xidhka isticmaalayaasha. Barxadku ma adeegsanayo qorshe iswaafajin ah, halkii, waa goob ballaadhan oo xayeysiis shaqsiyeed ah.
Shuruudaha raadinta adeegsadaha ayaa keena natiijooyinka ay doorbidaan. Macaamiisha Reddit waxay u adeegsadaan inay ka helaan dhaqdhaqaaqyo, saaxiibo, xaflado, isku xirnaan, iyo xitaa xiriiro muddo dheer ah.
In kasta oo ay tahay gole guud, weli waxaa jira sharciyo la xiriira da'da, asturnaanta, sharci ahaanta, iyo dhaqanka. Tusaale ahaan, qoraallada NSFW waa la oggol yahay laakiin waa in lagu calaamadeeyaa sida oo kale si dadka isticmaala ay u go'aansan karaan haddii ay doonayaan inay arkaan boostada iyo in kale
13. OkCupid - Bilaash oo caan ah
OkCupid waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan boggaga shukaansiga waxayna ka kooban yihiin astaamo dhammaystiran oo xubnaha kale ay si fiican u baari karaan ka hor inta aysan isku xirin. Waxaa laga heli karaa labada desktop iyo nooca moobiilka, oo ay kujiraan faahfaahin badan oo isticmaaleyaashu buuxin karaan natiijooyinka ugu fiican.
14. Ashley Madison - Goobta shukaansiga ugu fiican
Ashley Madison waa mid ka mid ah noocyada, loo sameeyay shakhsiyaadka is qaba ee doonaya inay yeeshaan arrimo gaar ah. Kuma xirna akoonnada warbaahinta bulshada sababtan awgeed.
Waxaa jira xayiraadyo kale oo qarsoodi ah iyo astaamo ka caawinaya dadka isticmaala inay qarsoodi noqdaan haddii ay ka baqayaan in la qabto. Intaa waxaa sii dheer, Ashley Madison waxay leedahay ikhtiyaar safar oo xubnuhu horay ugu sii baari karaan goobtooda soo socota.
Match.com - Ciyaartu waxay jirtay ilaa 1995 waxayna bixisaa barnaamij hagitaan shukaansi dalxiis ah si looga caawiyo kaqeybgalayaasha isku haynta iyo fikradaha haasaawe.
Gundhig - Barnaamijkan shukaansiga ayaa si ballaaran caan u ah wuxuuna la yimaadaa kalsooni. Dadka badankood waxay u isticmaalaan isku xirnaanta, iyada oo la siinayo saldhiggeeda isticmaalaha ballaaran iyo algorithms-ka goobta lagu wado.
BlackPeopleMeet - In ka badan 18 sano, BlackPeopleMeet waxay isku xireysay kali afrikaan Mareykan ah oo jacayl raadinaya. Xubnaha 100,000 + ee barta ayaa xoqin kara, emayl u diri kara, oo arki kara cidda aragta astaantooda.
Grindr - Grindr waxaa loogu talagalay shaqsiyaadka LGBTQA +. Waa goob ku saleysan, oo isticmaaleyaashu ugu horreyntii waxay u isticmaalaan inay ku xirxiraan, in kasta oo kulamada muddada-dheer ay sidoo kale suuragal tahay.
Kalluun badan - Websaydhkan shukaansigu wuxuu ku saleysan yahay Canadian, laakiin wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay la xiriiraan dadka ka socda adduunka oo dhan.
Goobaha shukaansiga waxay dadka u soo bandhigaan barkad aad u ballaadhan oo shakhsiyaad ka badan hal qof oo fursad u heli lahaa inay ku kulmaan nolosha dhabta ah. Tani waxay si gaar ah u tahay kiisaska isticmaalayaasha leh koox bulsheed xaddidan, ku cusub magaalada, ama haddii kale.
Guud ahaan, haa, barnaamijyada shukaansiga waa aamin, laakiin weli waxay u baahan tahay garasho iyo taxaddar. Barnaamijyadu waxay leeyihiin astaamo asturnaan oo meesha ka jira si ay uga caawiyaan xubnaha inay dibadda u baxaan, sida xaqiijinta astaanta. Websaydhada qaarkood ayaa sidoo kale iskaan ugu sameeya kaqeybgalayaasha, iyagoo kudaraya lakab dheeri ah oo nabadgelyo ah geeddi-socodka.
Shakhsiyaadka waa inaanay waligood bixin macluumaad shakhsi ah kahor intaan lala kulmin qof nolosha dhabta ah, sida magacooda, cinwaankooda, ama xitaa xaafadooda. Sidoo kale waa caqli in lagu diyaariyo taariikhda ugu horeysa meel fagaare ah. La xiriir saaxiib ka hor iyo ogeysiintooda inay taariikh u galayaan qof aan aqoonin sidoo kale ma ahan fikrad xun.
Weligaa ha u siinin macluumaad shakhsiyeed qof khadka tooska ah, gaar ahaan kahor intaadan si toos ah ula kulmin. Macluumaadkan waxaa ka mid ah magaca qoyska, loo shaqeeyaha, cinwaanka, iyo xitaa xaafadda.
Markaad la kulanto qof kasta oo khadka tooska ah, diyaarso taariikhaha ugu horreeya ee lagu qabanayo goobaha dadweynaha. Tani waxay noqon kartaa makhaayad, huteel, tiyaatar, ama meel kale oo dadweyne ah. Ka fogow aagagga go'doonsan sida xeebta, oo ha u oggolaan weligood shisheeyaha inay guriga soo galaan.
Ugu dambeyntii, la xiriir saaxiib ka hor taariikhda si aad ugu wargeliso halka ay ku sugan yihiin iyo waqtiga soo noqoshada la filayo. Ogeysii goorta ay tahay in guriga loo baxo. Si loo helo lakab dheeraad ah oo ilaalin ah, ka codso inay soo wacaan ama qoraal u diraan taariikhda si loo hubiyo nabadgelyada ugu badan.
Shukaansi markii ugu horeysay noqon kartaa xad-dhaaf ah! Si loo hubiyo nabadgelyada ugu fiican iyo inaad la kulanto ciyaarta shaqsi ahaan, raac tilmaamahan:
Joogto maskax furan. Shakhsiyaadka waxay umuuqan karaan inay shaqsi ahaan aad uga duwan yihiin intay internetka kuwada shaqeeyaan, marka u diyaar garow dookhyada inay wax iska bedelaan.
Iska ilaali inaad ahaato mid rasmi ah. Aasaasida kulan bulsheed, sida taariikhda qadada, waxay u oggolaaneysaa adeegsadayaasha inay is bartaan midba midka kale iyadoo aan la dareemin inay waajib ku tahay inay saacado wada qaataan.
Dib u eeg wadahadalka kahor taariikhda. Dib u aqri qofka muuqaalkiisa oo dib u eeg waxa laga hadlay, jadwalna ka samee mowduucyada guud ee laga wada hadlayo.
Haa, waa suurtagal! Haddii laba qof ay kulmaan, is waafaqaan, isla markaana kimistari la joogo, xiriirku wuxuu isu beddeli karaa wax deggan oo xasilloon. Waxay dhacdaa maalin kasta, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan boggaga sida Eharmony.
Trick to online Dating ayaa ah shaqsiga inuu ogaado waxa ay doonayaan iyo waxa ay ugu baahan yihiin xiriirka ka hor. Iyada oo ku saleysan liiska kor ku xusan, waxaa jira noocyo badan oo xiriir ah oo laga helo bogaggaan.
Ka taxaddar laakiin maskax furan markaad isticmaaleyso goob shukaansi. Bog kasta oo halkan ku yaal wuxuu leeyahay wax la soo bandhigo, iyadoo kuxiran waxa isticmaalaha rabo.
Afeef: Macluumaadku ma noqonayo talo ama dalab lagu iibsado. Iibsasho kasta oo laga sameeyo war-saxaafadeedka kor ku xusan waxaa lagugu sameeyay halistaada. La tasho khabiir lataliye ama xirfadle intaadan iibsan. Iibsasho kasta oo laga sameeyo xiriiriyahan waxay ku xiran tahay shuruudaha ugu dambeeya iyo shuruudaha iibinta websaydhka ee ku xusan isha. Daabacaha waxyaabaha ku jira iyo la-hawlgalayaashiisa qaybinta hoos u dhaca ayaan wax masuuliyad ah iska saarin si toos ah ama si dadban. Haddii aad hayso wax cabashooyin ah ama arrimo la xiriira xuquuqda daabacaadda ee la xiriirta maqaalkan, si naxariis leh ula xiriir shirkadda warkan ku saabsan yahay. Xidhiidhada ku jira dib-u-eegista badeecadan waxay u horseedi karaan guddi yar qoraaga haddii aad doorato inaad iibsato badeecada lagugula taliyay iyada oo aan qiimo dheeraad ah lagaa qaadin.
15 ka mid ah Barnaamijyada shukaansi ee khadka tooska ah ee ugu wanaagsan ee lagu helo Xiriirrada
Rajeynaya inaad cagahaaga dib ugu laabanto adduunka shukaansiga ka dib muddo dheer oo ku celcelis ah ku dhaqmid fogeyn bulsho Haddii ku habboonaanta lammaane cusub "waqtiyadii hore" ay ahayd mid cakiran - ku darista masiibo caalami ah isku darka ayaa ka dhigtay xitaa khiyaano in la helo dhimbiilaha ama isku xirnaanta. Inta lagu guda jiro caadadan cusub, ku shukaansiga astaamaha suurtagalka ah ee barnaamijka shukaansiga khadka tooska ah wuxuu noqon karaa habka ugu wanaagsan ee lagu barto qof.
Laakiin runtu waxay tahay, shukaansiga khadka tooska ah inuu dareemo culeys badan. Kaliya maahan inaad sameyso xukunno ku saleysan dhowr sawir iyo bios hal-line ah, ama jahwareerka u diraya farriimaha tooska ah (ama DMs) shisheeyaha oo kaliya in lagu jahwareero. Tirada badan ee barnaamijyada iyo isticmaaleyaashu waxay si fudud uga dhigi karaan xoqitaanku inay umuuqdaan hawl culus.
Xaqiiqdii, dhagaystayaasha shukaansiga khadka tooska ah ee internetka ayaa la filayaa inay u koraan 37.5 milyan oo isticmaala 2023, sida laga soo xigtay xogta Statista. Marka la gaaro 2040, eHarmony waxay saadaalisay in boqolkiiba 70 lamaanayaasha ay xiriirkooda ka bilaabi doonaan khadka tooska ah. Waa suurtogal in la sameeyo in shukaansiga adduunka uu dareemo wax la maamuli karo, in kastoo - waa inaad heshaa barnaamijka saxda ah. Tusaale ahaan, waxaa jira aalado gaar ah oo loogu talagalay kuwa jecel beerashada , hilibka doofaarka , ama xitaa gadh-garaacista (haa, dhab ah).
Sidaas darteed haddii aad raadineyso inaad xiriir ballaaran la sameyso, dheh, qof ka weyn 50, cusub oo shukaansi furiinka kadib, rajeynaya taariikh fiidiyoow ah, ama raadinaya xiriir, barnaamijyadan shukaansi ee internetka (qaar, xitaa bilaash) ayaa wada daboolaya saldhigyada.
Match waa barnaamijka ugu caansan ee shukaansiga khadka tooska ah ee 17 gobol marka loo eego sahanka PCMag ee 2,000 qof. Maaddaama mid ka mid ah adeegyada shukaansi ee OG (laga wareejiyey degel-keliya oo loo wareejiyey degel iyo barnaamij), Match wuxuu leeyahay codsi gaar ah kuwa u dhexeeya 45 iyo 65 oo raadinaya xiriir dhab ah; cilmi baaris dheeraad ah oo ay sameysay SurveyMonkey waxay ogaatay in 58 boqolkiiba dadka qaangaarka ah ee 45-54 sano jir ah ay isticmaalaan Match, in kabadan laba jibaar boqolkiiba kuwa isticmaala Tinder. Waad kala soo bixi kartaa bilaash, in kastoo taasi kaa xaddidi doonto daalacashada; haddii aad rabto inaad si dhab ah farriin ugu dirto la-hawlgalayaasha suurtagalka ah, diiwaangelintu waxay ka bilaabmaysaa $ 21.99 bishiiba.
Apps shukaansi ma aha oo kaliya loogu talagalay millenials; Boqolkiiba 20 dadka isticmaala internetka inta udhaxeysa 55 ilaa 64 sano ayaa adeegsaday barnaamij shukaansi ama adeeg, sida lagu sheegay ra’yi ururin laga sameeyay shirkadda tikniyoolajiyadda iyo cilmi baarista ee Morning Consult. OurTime jirsado fikradda ah dhaqanka hookup madaxiisa; taas bedelkeeda, waxay ku dhiirrigelisaa dadka isticmaala inay raadsadaan saaxiibbada qalinka, saaxiibbada, taariikhaha, xiriirada muddada dheer iyo lamaanayaasha is qaba Barnaamijka bilaashka ah ee laga soo degsadaa wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dirto emayl, xodxodasho, iyo inaad la jaanqaado la-hawlgalayaasha mustaqbalka, iyo lacag-bixinta ugu sarraysa ($ 38 bishiiba) waxay u oggolaaneysaa astaamo dheeri ah sida awoodda lagu arki karo cidda ku jeclaatay astaantaada.
Bumble ayaa iska dhigay dhamaan adeegyada kale ee haasaawaha ee ciriiriga u ah dukaanka barnaamijka iyadoo looga baahan yahay haweenka inay sameeyaan dhaqaaqa ugu horeeya marka ciyaar la sameeyo. Waxa kale oo aad helaysaa oo keliya 24 saacadood si aad farriin ugu dirto, illaa aad maal gashato xubin ka noqoshada Boost, oo ka bilaabata $ 10.99 toddobaad. Dumarku way jecel yihiin barnaamijka maxaa yeelay waxay hoos u dhigeysaa tirada farriimaha aan la weydiisan karin, ragguna way jecel yihiin-runtiina, boqolkiiba 58 jawaabeyaasha doorbiday Bumble ee sahaminta PCMag waxay ahaayeen rag-maxaa yeelay waxay qaadataa xoogaa ka mid ah cadaadiska oo bilawga ah. Waxaa intaa dheer, markii aad hesho qof aad xiiseyneyso, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku socoto taariikhda fiidiyaha barnaamijka.
Tinder ayaa laga yaabaa inuu keenay "dhaqanka hookup," laakiin wali waa mid ka mid ah barnaamijyada shukaansi ee ugu sareeya Mareykanka Waxay leedahay qiyaastii 8 milyan oo isticmaale, inta ugu badan ee barnaamijyada kale ee shukaansi ee ay baaraan Statista . Taasi waxay ka dhigan tahay inaad haysato fursad aad u adag oo aakhirka la jaanqaadi kara qof xiiseynaya xiisahaaga-xitaa haddii ay u baahan tahay wax badan oo bidix-xoqid ah si aad halkaas u hesho. Barnaamijku waa bilaash, laakiin waxaad heli kartaa astaamaha mudnaanta leh sida Tinder Plus oo bilaabmaya qiyaastii $ 9.99 bishii.
5. Kalluun badan
Mid kale oo ka mid ah bogagga asalka ah ee shukaansiga-barnaamijyada loo rogay isha ku haysa helitaanka xiriir, POF wuxuu lahaa 90 milyan oo isticmaaleyaal ah heydey. Weli waa caan (Statista ayaa ku qiimeysay lambarka labaad), barnaamijkuna wuxuu sheeganayaa inaad 2.7 jeer ay u badan tahay inaad wadahadal gasho 24-ka saacadood ee ugu horreeya marka loo eego barnaamijyada kale. Markii la codeynayay haweeneyda isticmaaleysa, barnaamijku wuxuu ogaaday in boqolkiiba 44 ay yihiin hooyooyinka kelida ah — iyo inay helayaan lamaane 10 boqolkiiba ka dhakhso badan celceliska isticmaalaha. Soo dejiso oo mari bilaash, oo cusbooneysii inaad ku darto sawirro badan ama marka hore u muuji lamaanayaasha suurtagalka ah ee ka bilaabmaya $ 19.99.
Ka dib markaad buuxiso foomka su'aalaha iyo dardargelinta (u maleyso kuwa xayeysiinta barafka sida: "my peeve xayawaanka ugu weyn waa…" iyo "heesta go-to karaoke waa…"), Hinge wuxuu bilaabi doonaa inuu kugula mid dhigo kuwa isticmaala ee wadaaga danaha guud Algorithm sidoo kale wuxuu kuugu adeegaa kulamadaada " Inta badan la jaan qaadi kara" - oo aad adigu sideed jeer uga badan tahay inaad raacdo, ayay leeyihiin. Kaliya maahan inuu barnaamijku ku tuso inta qof ee ku jeclaaday, wuxuu kaloo kuu sheegayaa waxay kaa jeclaadeen, taasoo sahlaysa inaad bilowdo wadahadal.
Algorithm OKCupid wuxuu adeegsadaa su'aalo taxane ah si loo go'aamiyo "boqolkiiba" aad la jaan qaadi doonto mid ka mid ah shan milyan oo isticmaale. Ahmiyadaas wadajirka ah ee ku saleysan iswaafajinta ayaa si gaar ah uga codsaneysa haweenka, kuwaasoo ka koobnaa boqolkiiba 58 jawaabeyaasha doorbiday barnaamijkan codbixinta PCMag. Sidoo kale waa mid loo wada dhan yahay, oo la siinayo 12 aqoonsi jinsi iyo 20 jihooyin jinsi ah si aad naftaada u qeexi karto si kasta oo aad rabto oo aad ula jaanqaadi karto cidda aad raadineyso.
Asal ahaan barnaamij Facebook ah, Zoosk wuxuu hadda ka mid yahay bogagga shukaansi ee ugu weyn halkaas, iyadoo in ka badan 30 milyan oo soo degsasho ah laga soo bilaabo markii la bilaabay 2007. Maanta, waxay leedahay in ka badan hal milyan oo isticmaaleyaal firfircoon, sida laga soo xigtay Statista-iyo 500,000 oo ka mid ah kuwa bixinaya xubnaha, taas oo macnaheedu yahay in ka badan kalabar dadka isticmaala ay si dhab ah uga go'an tahay inay helaan ciyaar. Halkii lagugu qasbi lahaa inaad buuxiso xogwaraysi dheer, barnaamijka algorithm ee barnaamijka ayaa qoraya qofka aad la falgaleyso si uu ugu adeegto kulamada suurtagalka ah.
Xilligan, eHarmony waa magac qoys. Waa tartanka ugu weyn ee Match, waana labada koox ee ugu da'da weyn waa 30- ilaa 44-sano jir iyo 55- ilaa 64-sano jir. Nidaamka is-qoritaanka-oo ay ku jiraan faahfaahin aad u faahfaahsan, 150-su'aalood oo su'aalo-waa safar, laakiin sumaddu mar bay sheegatay inay mas'uul ka tahay abuurista 4% guurka US Plus, xubnaha ka-qaybgalka lacagta caymiska waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku aadaan taariikhda fiidiyowga kahor kulanka shaqsi ahaan
10. Qaxwaha Buuxinaya Bagel
Maalin kasta duhurkii, Kafee Ayaa Kulmeysa Bagel ayaa daaweyn doonta oo kuu soo diri doonta ciyaaro tayo leh - ama "bagel" sida ay ugu yeeraan-oo lagu xushay algorithm-keeda. Iyadoo aan wax xoqid ah lagu soo darin iyo xulasho maalinle ah oo xadidan, barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuusan buuxin Dheeraad ah, astaamaha qotada dheer iyo su'aalaha "baraf-jebiyaha" ayaa dhiirrigeliya wada hadal macno leh, kana dhigaya barnaamijkan mid ku habboon kuwa doonaya inay bilaabaan xiriirro qatar ah.
Iyadoo in ka badan 14 milyan oo isticmaaleyaal ah, Hily waxay u taagan tahay "Hey, waan ku jeclahay!" Abku wuxuu adeegsadaa AI si isdaba-joog ah loogu hagaajiyo is-barbardhiga, wuxuuna leeyahay astaamo sida sheekooyinka Hily oo kaa caawinaya inaad si fiican u qabato qofka aad tahay. Abku waa lacag la'aan, oo leh rukhsad ikhtiyaari ah oo loogu talagalay khibrad-xayeysiis la'aan iyo qaab-qarsoodi la'aan.
Haddii aad raadineyso midkale Black kali ah oo wadaaga danahaaga, BLK waa barnaamij shukaansi ku takhasusay helitaanka xiriirkaas beeshooda isticmaaleyaasha. In ka badan 4 milyan oo soo degsasho ah, barnaamijka bilaashka ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad is waafajiso oo aad la sheekaysatid la-hawlgalayaasha mustaqbalka. Ama, u cusbooneysii xubinnimada caymiska ($ 10 bishiiba) khibrad xayeysiis la'aan ah, muuqaal kor loo qaaday, tiro aan xad lahayn oo jecel, iyo awoodda "dib u noqoshada" adoo qof siinaya fursad labaad.
Miyaad jeceshahay deriskaas quruxda badan laakiin ma garanaysid magaciisa ama magaceeda? Si joogto ah indhaha ula xiriir qof intaad ku dhex socoto eeygaaga laakiin ma bilaabin wadahadal? Happn waa barnaamij shukaansi oo kaa caawin kara ka dhigista kuwa u muuqda kuwa lumay xiriir dhab ah. Adoo adeegsanaya goobta taleefankaaga, waxaad la jaan qaadi kartaa dadka sidoo kale barnaamijka ku jira ee ka agdhow. In ka badan 100 milyan oo isticmaaleyaasha adduunka oo dhan, waxay u badan tahay inaad uun xaafaddaada ka hesho burburin.
Waxaa abuuray haweenka jilicsan, barnaamijkan shukaansi LGBTQ + (iyo barxadda bulshada) waxaa loogu talagalay haweenka iyo dadka aan qaangaarka ahayn ee doonaya inay jacayl ka helaan goob aamin ah. Macaamiishooda 6 milyan, HER waxay siisaa barnaamijyo ku-dhex-jira barnaamijyo iyo marti-gelinno munaasabado ah si loo caawiyo dhiirrigelinta dhimbiilladaas inay duulaan.
15. Wareeg Gudaha ah
Haddii aad dhab ka tahay helitaanka nuskaaga kale oo aad rabto inaad iska ilaaliso boodboodka meesha bannaan, Inner Circle wuxuu u baahan yahay dhammaan isticmaaleyaasha inay aqbalaan "The Date Better Ballan" taas oo faahfaahinaysa ballanqaadka ah "ixtiraam, la isku halleyn karo, oo loo dhan yahay." Abku wuxuu bixiyaa faahfaahin faahfaahsan, miirayaal gaar ah, iyo wadahadal dardar-sidaa darteed waad iska ilaalin kartaa farriimaha hal-ka-cabsi leh ee "hey".
Barnaamijyada Shukaansi ee ugu Fiican ee Midkan Loo Sameeyo Sannad Jaceyl
Qof kastaa wuu ogyahay qof la kulmay "qof weligiis ah" inkasta oo shukaansiga khadka tooska ah laakiin sida shukaansiga laftiisa, helitaanka goobta kugu habboon adiga kugu qaadan karto tijaabo iyo qalad. Wadajirka 'Kochava Collective', oo ah martigaliyaha suuqa ugu weyn ee macluumaadka moobilka madaxbannaan, ayaa tirtiray lambarrada si loogu taliyo dhowr goobood oo ku saleysan tirada isticmaaleyaasha. "Waxaan haynaa xog ku saabsan in ka badan 7.5 bilyan oo qalab ah," ayuu yiri Jake Courtright, oo ah maamulaha Kochava. Iyadoo qayb ka ah xogtan la dejiyay, waxaan haynaa 'app garaaf' macluumaadka ku saabsan qalabkan, oo asal ahaan ah liiska barnaamijyada lagu rakibay qalabkan. Waxaan eegnay dhammaan barnaamijyada shukaansiga ee waaweyn ee Google Play iyo dukaamada appka, ka dibna waxaan ogaanay shan barnaamij oo iyagu leh waxyaabaha ugu badan ee ku jira xogtayada. ”
Laakiin maxaa yeelay dhammaanteen ma wada qaadanno go'aanno ku saleysan tirooyinka oo keliya, waxaan sidoo kale liiskan ku soo koobnay dhawr fursadood oo kale oo ku habboon xaaladdaada gaarka ah. Qaar ka mid ah kuwani waxay wax u qabtaan dadka LGBTQ +, dadka isticmaala da 'gaar ah, dadka isticmaala Madow ama BIPOC, kuwa dano gaar ah ka leh guud ahaan iyo kuwa kale oo laga yaabo inaysan ka helin taariikhdooda saxda ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan. Haddii aad raadineyso dharbaaxo aan caadi ahayn, dib u soo kabasho si aad uga gudubto burburka ama xiriirkaaga xiga ee muddada dheer, waxaad ku bilaabi kartaa inaad soo degsato mid ka mid ah barnaamijyadan shukaansi.
Haddii aad internetka ku jirtay gabi ahaanba, waxaad u badan tahay inaad ogtahay Tinder. Sida laga soo xigtay Kochava Collective, barnaamijku wuxuu leeyahay tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha dhammaan barnaamijyada shukaansiga ee halkaas ka jira. In kasta oo adeegsadayaal badani ay u jeestaan ​​dhanka Tinder oo ay kula kulmaan kulanyo iska caadi ah, kuwa kalena waxay halkan ka heleen jacayl muddo dheer socday.
On Bumble, haweenku waa kuwa hela inay bilaabaan isgaarsiinta. Dabcan, jinsikee sameysa tallaabada ugu horreysa waa mid aan ka yareyn arrinta haweenka LGBTQ +, laakiin dumarka raadsada qaayaha ayaa laga yaabaa inay u helaan neef hawo nadiif ah. Kochava wuxuu sheegay in inta badan adeegsadayaasheeda sidoo kale ay ku dhacaan da'da 26 ilaa 35 sano jir, sidaa darteed dadka da'da yar ayaa sidaas jeclaan kara sidoo kale.
Qof kasta oo in yar ku jiray ciyaarta shukaansiga ayaa laga yaabaa inuu maqlay OkCupid, oo jiray illaa 2004. OG waxay hadda leedahay barnaamij ay la socoto su'aalaheeda saxiixa oo ku saabsan wax kasta oo ka socda diinta ilaa looska looska vs jelly si ay kaaga caawiyaan inaad hesho lammaanahaaga kaamil ah.
Barnaamijyada ay soo bandhigeen Kochava, midkani wuxuu lahaa saldhigga adeegsadaha ugu da'da yar kadib Bumble, iyada oo in ka badan kalabar isticmaaleyaasheeda ay soo galayaan da'doodu ka yar tahay 36 jir. .
Isticmaalayaasha haysta qadka yar ee qosolka badan iyo silsiladaha lacagta ayaa laga yaabaa inay ka helaan ruuxyo qaraabo ah barnaamij ay la socdaan dad badan oo ku jira dhaqankooda. Xogta Kochava waxay muujineysaa in inta badan isticmaaleyaasha 'MeetMe' ay ku jiraan da'da u dhaxeysa 46- ilaa 55-sano jir, oo ay si dhow ula socdaan 55 ilaa 65 qaybta.
Intaa waxaa u dheer inuu leeyahay saldhig ballaaran oo isticmaale ah, Kochava wuxuu xusayaa habkaas in ka badan ragga marka loo eego haweenka soo dejiya Happn, oo ah barnaamij shukaansi goob ku saleysan. Mudanayaal raadinaya jaantusyo, laga yaabee in fursadaha ay weligood adiga kuula socdaan.
Best Shukaansi Apps
Tifatirayaashayadu si madaxbanaan ayey u baaraan, u tijaabiyaan, uguna taliyaan alaabada ugu fiican; waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan nidaamkayaga dib-u-eegista halkan. Waxaa laga yaabaa inaan helno guddiyo ku saabsan iibsashada laga sameeyay xiriiriyeyaasha aan dooranay.
Luis Alvarez / Sawirada Getty
Udhaqaajinta adduunka ee barnaamijyada shukaansiga ayaa noqon kara mid xad dhaaf ah, gaar ahaan haddii aadan si sax ah u hubin waxa la soo dejinayo. Barnaamijyada qaarkood waxaa loogu talagalay cilaaqaadka muddada-gaaban, halka kuwa kale ay runtii ku dhiirrigeliyaan is barashada ka hor inta aan la kulmin is biirsaday ama kafee FaceTime. Haddii aad raadineysid inaad hoos u dhigto dariiqa ama foorar aan caadi ahayn, waxaa jira adeeg adiga kugu habboon.
Halkan waxaan ku soo koobnay barnaamijyadii shukaansiga ugu fiicnaa, markaa waad la kulmi kartaa ciyaartaada - ha noqoto tan habeennimo ama weligeedba.
Barnaamijyada shukaansi ee ugu wanaagsan 2021
Guud ahaan ugufiican : Fariid
Guurka ugufiican: Tartan
Ku Fiican Ka-saaris: Raya
Ugu Fiican Taariikhaha Koowaad: Bumble
Best LGBTQ shukaansi App: HER
Ugufiican Shukaansiga Yuhuudda: JSwipe
Ugu Fiican Shukaansiga Caadiga ah : Gundhig
Guud ahaan ugufiican: Fariid
Maxaan u Dooranay: Fiixku wuxuu ku siinayaa tiro kooban oo xiriir ah maalintii, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar fiican dadka raadinaya xiriiro ka sii daran.
Wuxuu wadaagaa macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dadka, oo ay kujiraan waxyaalaha aad jeceshahay iyo waxyaabaha aad neceb tahay
Wuxuu dareemayaa diirad saar badan wadahadal macno leh iyo dhisida xiriir
Kaliya waxay bixisaa tiro kooban oo isboorti ah mooyee haddii aadan bixin si kor loogu qaado
Waxay rabtaa dadku inay bixiyaan si ay u siiyaan kabriid “ubax,” taasoo ka dhigaysa barnaamijka wax yar oo wareer ah
Hinge wuxuu bilaabay sidii waddo loogu xirayo asxaabta asxaabta iyo dadka shabakadaada. Markii uu aasaasay agaasimaha guud Justin McLeod, barnaamijku wuxuu dadka tusay astaamo ku saleysan dhawaansho iyo sidoo kale saaxiibbada Facebook ee ay wadaagaan. Hadda, waxay si fudud isugu xiraysaa isticmaaleyaasha dadka ku dhow dhow xaafadda ay doorteen.
Isticmaalayaashu waxay dooran karaan inay la xiriiraan qof adigoo garaacaya badhanka wada hadalka oo iswaafajinaya ama uga tagaya faallo bog. Profile-yada ayaa bixiya dardar galin si wada hadalka loo bilaabo sida "Haddii jacaylka kani khaldan yahay, ma doonayo inaan sax noqdo…" iyo "Waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa inaan kaa ogaado adiga waa…."
Hinge wuxuu ku tusayaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dadka, markaa haddii aadan raaxo lahayn oo aad shisheeyaha ka la kulanto internetka, tani way sahlaysaa. Waxay ku siineysaa magacyada dadka ee ugu dambeeya iyo sida caadiga ah xaafadooda, da'da, dhererka, shaqada, magaalada ay ku nool yihiin, iyo kulliyadda.
Abku waa bilaash laakiin wuxuu doonayaa dadku inay bixiyaan, iyagoo waydiinaya inay bixiyaan "rooseesyo" dalwad ah oo loogu talagalay isboorti taagan oo adeeggu kuu doorto adiga oo ku saleynaya waxaad raadineyso. Dhammaantood waxay aad u dareemayaan sidii dhacdo 'Bachelor' . Algorithms-ka maalin walba lagu xusho kulankaaga ugu fiican sidoo kale caan kuma ahan waxtar. Marar badan waxay dooran doonaan qof aad u fog ama xiriir siyaasadeed oo duur xul ah. Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inay ku tusaan qof aad hore u taqaanay oo xoogaa raaxo la'aan ah.
Si ka duwan barnaamijyada kale ee ay tahay inaad labadiinuba isku raacdaan inaad iswaafajisaan ka hor intaan farriinta la dirin, dadka Hinge-ku waxay kuu soo diri karaan furitaan si wadahadalka u socdo. In kasta oo ay lacag la'aan tahay, waxaa jira nooc lacag ah sidoo kale. Xubinnimada La Doorbiday waxay ku saabsan tahay $ 30 bil, $ 60 saddex bilood, ama $ 90 muddo 6 bilood ah waxayna kuu oggolaaneysaa inaad dirto xiriiro aan xadidnayn oo aad dejiso miirayaal adag.
Maxaan u Dooranay: Waxaan u dooranay Ciyaarta maxaa yeelay waa ikhtiyaarka ugu fiican ee daters halis ah kuwaas oo guurka ku fakaraya.
Xubnaha waxay si dhab ah u raadinayaan xiriir ama guur
Waxay siisaa dadka isticmaala macluumaad ballaaran oo ku saabsan ciyaaraha dhici kara
Ikhtiyaarka bilaashka ah wuxuu siinayaa dadka isticmaala aragti horudhac ah, oo aan lahayn waddo ay ku galaan tartamada ama farriimaha
Sababtoo ah waa barnaamij aad lacag ku bixiso, dadka isticmaala si dhab ah ayey u qaataan
Kaliya waxaad kubilaabi kartaa wadahadal xulashooyinka hadiyado adiga kugu habboon
Tartanku waa heegitaan hore oo sabab ah. Sababtoo ah adeegsadayaashu waa inay bixiyaan xubinnimada, waxay ka dhigan tahay in dadka ku soo biiraya ay diiradda saarayaan ballanqaad. Match.com waxaa aasaasay Gary Kremen iyo Peng T. Ong oo ku yaal San Francisco sanadkii 1993. Tan iyo markaas, waxay ku sii jirtay caan, gaar ahaan dadka raadinaya cilaaqaadka qatarta ah.
Markaad isqorto, waxaad gashaa magacaaga, da'daada, dhererkaaga, inaad caruur rabtid ama aadan rabin, sidaad kali u tahay, iyo inaad sigaar cabto. Ka dib waxaad ka jawaabeysaa su'aasha ah "Maxaa adiga kaa farxiyay?" xulashada nashaadaadyada ay ka mid yihiin riwaayadaha, karinta, baloog-garaynta, bandhigyada daawashada qaayaha, isboortiga, iyo inbadan. Marka xigta, waxaad xulaneysaa waxaad raadinaysid lammaanahaaga, oo ay kujiraan da'da, kala duwanaanta dhererka, diinta, iyo in mowduucyadaas ay yihiin "waa inay leeyihiin" iyo in kale.
Iyada oo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah, xubnuhu waxay farriimaha xaddidan ka helayaan "xulashooyinka ugu sarreeya" ee ay Match u dooratay iyaga oo ku salaynaya is waafaqsanaanta. Xulashada mudnaanta waxay xubinta u oggolaanaysaa farriinta aan xadidnayn, waxyaabaha la jecel yahay, awoodda loo arko qof walba oo adiga ku jecel oo isagu fiiriyay astaantaada, wadahadal fool-ka-fool ah oo lala yeesho khabiir shukaansi, iyo in ka badan.
Nasiib darrose, haddii aad xiisaynaysid isticmaalka Match, waa inaad bixisaa; haddii kale, ma arki kartid cidda ku soo diraysa ama waxa ay dhahayaan. Xubinnimadu waxay ku kacdaa qiyaastii $ 18 bishiiba qorshe sanadle ah, qiyaastii $ 22 bil kasta muddo lix bilood ah, iyo ku dhowaad $ 30 muddo saddex bilood ah.
Maxaan u Dooranay: Raya wuxuu caan ku yahay inuu noqdo barnaamij gaar ah oo shukaansi ah oo ay booqdaan dadka caanka ah iyo saamileyaasha.
Xubnaha waa xushmad iyo xiiso badan
Gaar ahaanta barnaamijka ayaa ka dhigaysa mid xiiso badan oo rafcaan leh
Farxad leh in la arko astaamaha shukaansiga caanka ah
Xubnuhu waa inay bixiyaan waxyaabo badan oo jecel maalin kasta haddii ay gaaraan xaddidooda maalinlaha ah
Kaliya ka shaqeeya on iPhone
Raya wuxuu caan ku yahay inuu noqdo mid ka mid ah barnaamijyada shukaansiga gaar ahaaneed, soo-gudbinta A-liistada iyo saamileyaasha xubin ahaan. Sababtoo ah waa martiqaad kaliya, waxaa jira hanaan codsi, dadkuna waa inay lacag bixiyaan si ay xubno uga noqdaan, waxaa jira codsi tayo sare leh oo laga codsado marka loo eego barnaamijka caadiga ah.
Raya qiyaastii waa $ 7 bil kasta waxaadna mari kartaa dadka adduunka oo dhan. Haddii aad gaadho waxyaabaha aad jeceshahay maalin kasta, waxaad ku bixin kartaa qiyaastii $ 7 30 soddon maalin oo dheeraad ah, ama waxaad si fudud ula sheekaysan kartaa xidhiidhadaada hadda jira, kuwaasoo barnaamijku kugu boorinayo inaad sameyso. Markaad xubin ka noqotid, waxaad saaxiibbada siin kartaa baasaboor kaas oo gacan ka geysan kara dedejinta gelitaankooda, in kasta oo barnaamijku xaq u leeyahay inuu diido codsiyada.
Xubnuhu waxay ku yaalliin adduunka oo dhan waxayna u muuqdaan inay ka shaqeeyaan meelaha hal abuurka leh. Asal ahaan waa Guriga Soho ee shukaansiga. Waad isku xidhi kartaa koontadaada 'Instagram', waxaad dooran kartaa hees, waxaad samayn kartaa muqaal sawiro ah, waadna raadin kartaa xiriirro jacayl ama asxaab. Waxaad sidoo kale ka raadin kartaa goobta si aad u aragto cidda u dhow barnaamijka. Raya sidoo kale wuxuu ku tusi doonaa asxaabta aad isku midka tihiin haddii aad labadiinuba leedihiin taleefan lambar saaxiibkiis ah, sidaa darteed marwalba waad weydiin kartaa baalkaaga haddii ay ku damaan qaadayaan taariikhda aad yeelan karto. Waxa kale oo aad ka raadin kartaa xubnaha magaalo gaar ah ama warshad gaar ah, taas oo xitaa ka dhigaysa mid fudud in la isku xidho ama lala kulmo dadka.
Maxaan u Dooranay: Bumble wuxuu leeyahay fikrad u gaar ah: Haweenka fariinta ragga marka hore ka dibna waxaa la siiyaa 24 saac si ay uga soo jawaabaan, taas oo ka dhigaysa barnaamij ay haweenku wadaan.
Waa sahal in lala xiriiro dad badan hal mar
Haweenka fariin marka hore si ay u dooran karaan mawduuca
Goob-ku-saleysan si aad u aragto cidda kuu dhow haddaad fasax ku jirto ama magaalo cusub
Ragga si fudud ayey uga jawaabi karaan siyaabo aan raaxo lahayn oo waxaa jira dhib badan
Rag badan ma liis gareeyaan macluumaad badan oo iyaga ku saabsan
Waxaad haysataa waqti xadidan oo aad ku isticmaasho furitaanka, markaa waa inaad si joogto ah u hubiso barnaamijka
Markii Bumble uu bilaabay haweenayda aasaasiga ah Whitney Wolfe sanadkii 2014, waxay ku salaysnayd fikradda ah in haweenku marka hore farriin soo diraan, taasoo la micno ah inay dooran karaan wada hadalka bilowga ah oo ay xakamayn karaan sheekada. Wolfe waxay sii waday sameynta liiska Forbes 30 Under 30 iyo sidoo kale waqtiga 100 List waxayna noqotay haweeneyda ugu yar ee qaadata shirkad dadweyne kaliya 31.
Isticmaalka Bumble waa wax fudud. Ku samee astaan ​​sawir leh sawirradaada iyo macluumaadka naftaada ku saabsan, ka dibna waxaad yeelan kartaa qorshe bilaash ah ama waxaad ku bixin kartaa fursado kale. Qorshaha "Spotlight" wuxuu balan qaadayaa ilaa 10 jeer in kabadan oo kulan wuxuuna kusii dhigayaa wejiga hore ee safka 30 daqiiqo sidaa darteed kulamada aad ubaahantahay waxay kugu arki doonaan marka hore. Waxaad ku bixin kartaa qiyaastii $ 1 30 nalalka iftiinka ah, ama qiyaastii $ 6 halka toosh lagu ifiyo. Ama waxaad ka heli kartaa 30 nal nal oo ku saabsan $ 50.
Ikhtiyaarka kale waa SuperSwipe, oo leh waxaad heli doontaa "ilaa 10x wadahadal dheeraad ah." SuperSwipes waxay kuu oggolaaneysaa inaad u ekaato sida qof oo kale, markaa markay bilaabaan xoqista, waxaad ka mid noqon doontaa dadka ugu horreeya ee ay arkaan. Waxay ku saabsan tahay $ 1 30 SuperSwipes iyo $ 3 midkiiba laba SuperSwipes. Haddii aadan jeclayn inaad bixiso labadan ikhtiyaar, waxaad sidoo kale cusbooneysiin kartaa koontadaada si aad uhesho dhammaan astaamaha hal mar. Isticmaalayaasha Premium waxay cusbooneysiinayaan qiyaastii $ 18 ka dibna waxay helayaan waxyaabo aan xadidneyn, miirayaal horumarsan, habka safarka si loo arko cidda meelaha qaarkood ku xoqeysa, iyo dib u noqoshada aan xadidneyn haddii ay dhacdo inaad si qaldan ugu rogto qof, waxyaabo kale oo badan.
Bumble waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay qof bilaabaya oo raba inuu arko dhammaan dadka u-qalma ee hareeraha ah. Waa inaad dhanka bidix u leexataa midig si aad dadka ula jaanqaado, ka dibna waxaad haysataa 24 saacadood oo aad ku dhaqaaqdo dhaqdhaqaaqa ugu horreeya oo aad ku bilowdo sheekaysiga, markaa waa inaad si joogto ah u hubisaa abka, haddii kale tartamadu way dhacayaan. Ragga ayaa markaa haysta 24 saacadood oo ay ku soo jawaabaan. Waxaad ku baari kartaa barnaamijka miirayaasha, adiga oo dooranaya cidda aad xiiseyneyso (ragga, dumarka, ama qof walba), da'da, iyo masaafada. Waxa kale oo aad dejin kartaa miirayaal horumarsan, adigoo raadinaya dherer gaar ah, calaamadda xiddigiska, sooyaalkiisa waxbarasho, iyo inbadan.
Kufiican LGBTQ Shukaansi: HER
Maxaan u Dooranay: Waxaan u dooranay HER maxaa yeelay waa barnaamijka ugu weyn adduunka ee shukaansiga bilaashka ah ee haweenka LGBTQ.
HER waa barnaamijka ugu weyn ee shukaansiga bilaashka ah ee haweenka lesbian iyo kuwa jilicsan
Abku wuxuu la wadaagayaa wararka LGBTQ + iyo dhacdooyinka maxalliga ah ee dhacaya, iyagoo bixinaya goobo ammaan ah
Dadku waxay ka cawdaan in lamaanayaasha qaar ay raadinayaan barnaamijyo seddex meelood leh
Haddii aadan bixin, waa inaad saacado sugeysid suufka badan
HER waa barnaamijka shukaansiga bilaashka ah ee adduunka loogu talagalay haweenka jilicsan, oo bixiya awoodda iswaafajinta, iyo sidoo kale bixinta wararka ku saabsan kulamada maxalliga ah ee meelaha nabdoon. Abku wuxuu u shaqeeyaa bulsho ahaan wuxuuna isku dayaa inuu noqdo mid soo dhaweyn iyo taageero leh.
Badanaa sida Gundhigga, HER waxay ku saabsan tahay xoqidda. Bidix u dhaqaaq bidix micnaheedu waa inaadan xiiseyneynin qofka, halka bidix u garaac midig (ama wadnaha emoji) macnaheedu waa inaad jeclaan laheyd inaad barato qofka. Kadib, qofkaas ayaa go'aansan kara haddii dareenku yahay mid wadaaga oo uu kuu soo diro fariin.
In kasta oo ay bilaash tahay, waxaa sidoo kale jira saddex nooc oo xubinnimo xubinnimo qaddarin ah. Mudnaanta, xubinnimada hal bil waxay ka bilaabataa qiyaastii $ 15, muddo lix bilood ah waa kudhowaad $ 60 sanadkiina waa qiyaastii $ 90.
Maxaan u Dooranay : JSwipe waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay dadka Yuhuudda ah inay xoqdo oo ay la kulanto, iyadoon loo eegin meesha ay ku saleysan yihiin.
Awood u leh inuu si fudud ula kulmo kali yahuudda
Qaabka uu u dejisan yahay barnaamijka App-ka ayaa dhib ka dhigaya in la arko halka ay dadku salka ku hayaan ama ay ka biirayaan
JSwipe waa ikhtiyaar weyn haddii aad Yuhuud tahay ama aad rabto inaad shukaansi la wadaagto ragga ama dumarka Yuhuudda ah. Waxaa la bilaabay 2014 in ka badan Kormarista aasaasihii David Yarus, oo sidoo kale u shaqeeyay dhalashada Israel iyo Hillel waqtigaas, barnaamijka ku saleysan Brooklyn waxaa markii dambe la helay tartankiisa, JDate.
On JSwipe, waxaad gashaa taariikh nololeed gaagaaban, waxbarashadaada, iyo da'daada. Waxaa sidoo kale lagaa codsanayaa inaad buuxiso inaad haysatid kosher iyo kooxdaada. Kadib, waxaad bilaabi kartaa kabasho. Boggaaga bogga wuxuu kuxiran yahay boggaaga Facebook, sidaa darteed wuxuu ku tusi doonaa waxaad xiiseyneyso inaad la wadaagto tartamada iyadoo lagu saleynayo wixii aad horay ugu jeclaan jirtay Facebook.
JSwipe waxay bixisaa nooc bilaash ah, iyo sidoo kale xubin-kooxeed heer-koowaad ah, halkaas oo aad u aadi karto dhacdooyinka gaarka ah oo aad ka heli karto faa'iidooyin sida cabitaanno bilaash ah iyo ganacsi. Nooca gaarka ah ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad aragto cidda jeceshahay astaantaada, kor u qaadista astaantaada kulamo badan, mari
Xubinnimada hal bil waa qiyaastii $ 25, seddex bilood waxay ku kacaysaa $ 45, xubinnimada lixda bilood ahna waa qiyaastii $ 60. Sida badan oo kale 'Tinder', waxay ku tusineysaa cidda hareerahaaga ku wareegeysa iyada oo ku saleysan goobta, laakiin sidoo kale waxaad dejin kartaa meyl gacantiisa ka weyn oo aad ka arki kartaa kali adduunka oo idil.
Ugu Fiican Shukaansiga Caadiga ah: Gundhig
Maxaan U Dooranay: Ma iska indho tiri kartid barnaamijka shukaansiga asalka ah, ee loo yaqaan 'Tinder', kaas oo kiciyay tallaabadaas. Waxay ku habboon tahay isku xirnaanta ama haasaawaha muddada-dheer.
Wanaagsan ee suulka suulkaaga adduunka ee shukaansiga khadka tooska ah
Si fudud loo socdo, gaar ahaan shukaansi bilowga app
Mid ka mid ah ikhtiyaarrada ugu caansan ayaa u janjeedha dhanka isku-xidhka
Wuxuu xooga saarayaa xulashooyinka aan dhamaadka lahayn ee aad la kulanto intaad xoqayso
Tinder runtii waa barnaamijka bilaabay wax walba. Waxay bilaabantay 2012 waxayna runti bedeshay muuqaalka shukaansiga waligeed, soo bandhigida kali aduunka oo u boodboodaya bidix ama midig si ay ula jaan qaado dadka bedelka u noqon kara ama kuwa kale ee muhiimka ah.
In kasta oo ay jiri jireen dad badan oo raadinaya dhammaan waxyaalaha kala duwan, haddana hadda wax badan ayaa loo habeeyay xagga shukaansiga aan caadiga ahayn. Tinder waxay u badan tahay inay ku fiican tahay magaalo yar oo aan dad badani ku jirin barnaamijyada niche badan laakiin xaqiiqdii way ogyihiin inay dadku raadinayaan abaabullo aan rasmi ahayn.
In kasta oo ay ku bilaabatay sidii barnaamij gebi ahaanba bilaash ah, haddana waxaa jira ikhtiyaar lacag-bixin oo bilaash ah oo lacag-bixin ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay "aad u jecel yihiin" dadka (nooc dheeri ah oo sasabasho ah oo la sheegay inay saddex-jibbaareyso fursadahaaga kulan), isticmaal muuqaalka baasaboorka si aad u aragto cidda ka baxsan Halkaas ka jira meelo kale, oo arag cidda ku jeclayd ka hor intaadan si toos ah ugu dhicin. Tinder Gold ayaa siisa isticmaaleyaasha intaas oo dhan iyo in ka badan qiyaastii $ 15 bishii, halka Tinder Platinum ay siiso dadka isticmaala fursadahaas iyo sidoo kale awoodda ay ugu diraan qof kahor intaanay isu dhigmin qiyaastii $ 10 bishiiba muddo lix bilood ah.
Xukunka kama dambaysta ah
Soo degsashada barnaamij shukaansi waxay umuuqan kartaa ballanqaad weyn oo waxaad dareemeysaa xoogaa xoogaa ah haddii aadan hubin midka ugu horreeya ee la iskudayo, maxaa yeelay dhammaantood waxay leeyihiin vibes aad u kala duwan. Fariin waa ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad raadineyso wax yar oo aad uga sii daran oo ku saabsan shukaansi app. Waxay ku siineysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taariikhaha suurtagalka ah waxayna kugu dhiirineysaa wadahadallo macno badan leh. Raya ayaa kufiican hadaad rajeyneysid inaad aragto qof caan ah ama aad rabto inaad xiriir la sameysid hal abuurayaal kale oo la fikir ah, laakiin way adkaan kartaa inaad martiqaad u hesho.
Bumble waa fiican yahay haddii aad rajeyneyso inaad tagto taariikho badan oo hore. Abku wax badan kaaga sheegi maayo dadka, laakiin wuxuu sahlayaa in si aan dhammaad lahayn loo xoqdo oo la bilaabo sheekaysiga. Ka fikir sida inbadan oo aad lakulmayso qof baarka ku jooga si caadi ah. Haddii aad raadineysid inaad shukaansi la wadaagtid haweenka oo aad rabto barnaamij si gaar ah loogu talagalay, HER ayaa ah shayga ugu fiican. Hadana hadaad rabto inaad iska dhigto mid iska caadi ah, Tinder waa sabab aamin ah.
Sidee Do Apps Apps shaqeeyaan?
Barnaamijyada qaarkood waxay u baahan yihiin labada dhinacba inay si sax ah u maraan haddii ay xiiseynayaan ka dibna kuu oggolaanaya inaad isku xirto. Qaar kale waxay u oggolaadaan hal qof inuu diro farriin, ka dibna qofka qaata ayaa go'aan ka gaari kara inuu doonayo inuu ka jawaabo iyo in kale. Qaar ka mid ah barnaamijyadu waxay bixiyaan macluumaad ballaaran, oo ay ku jiraan kuleejka, dhererka, iyo xitaa haddii dadku rabaan ama aysan rabin carruurta, halka kuwa kale ay si fudud kuu tusi doonaan lamaanayaal kuu dhow oo aan lahayn macluumaad badan.
Ma Jiraan Fursado Bilaash ah oo Lacag Bixin ah oo loogu talagalay Barnaamijyada Shukaansi?
Inta badan barnaamijyada shukaansigu waa bilaash, ama ugu yaraan waxay leeyihiin ikhtiyaar bilaash ah iyo sidoo kale qiimo, ikhtiyaar la bixiyo. Ikhtiyaarka bilaashka ah wuxuu badanaa dadka siiyaa fursad ay wax ku xoqdaan, halka bixinta ay dadka u oggolaaneyso inay noqdaan kuwa gaar ah, dejinta miirayaal muujinaya dherer, diin, ama xiriir siyaasadeed oo keliya, tusaale ahaan. Barnaamijyada badankood, way fududahay inaad iyaga soo dejiso ka dibna isticmaal nooca bilaashka ah illaa aad raadineyso wax aad u gaar ah. Barnaamijyada qaarkood, sida Raya, waxay u baahan yihiin dhammaan isticmaaleyaasha inay bixiyaan lacag yar oo bille ah. Badanaa, khidmaddu way yar tahay haddii aad bixiso dhowr bilood ama ka badan.
Immisa ayey ku kacaysaa Barnaamijyada Shukaansi?
Barnaamijyada shukaansiga waxay u dhexeeyaan bilaash illaa $ 100 haddii aad hesho nooc sare oo aad dhowr bilood ku maal gashato. Ikhtiyaarrada ugu qaalisan ayaa ku siin doona waxyaabo badan oo qiimo sare leh oo kor u qaadaya astaantaada, ama adiga ayaa ku dhejinaya iftiiminta kulamada suurtagalka ah ama ku siinaya ikhtiyaarka ah inaad qof u dirto adigoon marka hore u dhigmin
Waxaan khabiirada ka weydiinnay barnaamijyada, akhrinta dib u eegista, waxaanna baarnay sannado aan khibrad u lahayn isticmaalkeeda. Waxaan sidoo kale raadineynay barnaamijyo bixiya macluumaad ballaaran oo ku saabsan kuwa kale, iyo sidoo kale dabacsanaan markay tahay qorshooyinka lacag bixinta. Muhiim ayey noo ahayd inaan soo bandhigno xulashooyin kala duwan oo doorbidista shukaansiga ah, hadey isku xirnaansho aan caadi ahayn, taariikhaha ugu horreeya, ama xitaa guurka. Ka wada-qayb-qaadashadu waxay sidoo kale ahayd qodob muhiim ah oo lagu go'aaminayo xulashooyinkayaga, sidaas darteed barnaamijyada loogu talagalay jihooyinka galmada iyo diimaha kala duwan ayaa sameeyay liistada.